Degso Pure Farming 2018 loogu talagalay Windows
Degso Pure Farming 2018
Degso Pure Farming 2018,
Beeraha Saafi ah 2018 waa ciyaarta jilitaanka cusub ee Techland, oo aan si fiican ula soconno soosaarkeeda aadka u guulaystay sida Dhimashada Iftiin.
Beeraha Saafi ah 2018, oo ah jilid -beereed leh tayo leh oo dhaafi kara ciyaaraha Beeraha Simulator, wuxuu isku daraa tayada garaafyada sare leh farsamooyinka ciyaarta ee dhabta ah. Ciyaarta dhexdeeda, waxaad ku adeegsan kartaa baabuur ruqsad haysta oo dhab ah oo loo adeegsado beeraha casriga ah, waxaadna goosan kartaa adoo beeraya alaabooyin u gaar ah gobolka iyo cimilada Yurub, Waqooyiga iyo Koonfurta Ameerika iyo Aasiya.
Waxaa jira 3 qaab ciyaareed oo kala duwan oo ku jira Beeraha Saafi ah 2018. Hababkaan ciyaaruhu waxay rafcaan u yihiin labada cayaaryahan ee cayaaraha jilitaanka iyo kuwa bilowga u ah cayaaraha jilitaanka.
Beer -Beereedka Pure 2018, ciyaartoydu waxay ka qayb qaadan karaan soo -saarka wax -soo -saarka beeraha iyo hawlaha xoolaha labadaba. Waxaad ku beeri kartaa gawaarida dhabta ah ee sumadaha dhabta ah, oo leh xisaabinta fiisikiska dhabta ah ee beeraha, aqalka dhirta lagu koriyo, bakhaarka iyo qaybaha beeraha kale.
Tayada garaafyada ee Pure Farming 2018 waa mid aad u sarreeya. Shuruudaha nidaamka ugu yar ee ciyaarta ayaa loo taxay sida soo socota:
- Nidaamka hawlgalka 64-bit (Windows 7 iyo wixii ka sareeya)
- 2.3 GHz Intel Core i5 processor
- Nvidia GeForce GTX 560 kaarka garaafyada oo leh 2GB xusuusta fiidiyaha
- 12 GB oo lacag laaan ah
Pure Farming 2018 Noocyada